Ka 15, 2018 admin
Coinbase ọkwa ụlọ nke institutional ngwaahịa
Cryptocurrency mgbanwe Coinbase mara ọkwa na ọ na-chie launching Coinbase Kpọchiri, a ngwaahịa iji na-akwado institutional cryptocurrency doo.
Coinbase Kpọchiri na-a kaadị nchekwa ọrụ na-eduzi na nnukwu ego oru.
Ngwaahịa bụ akụkụ nke a ụlọ nke institutional ngwaahịa a na-ulo oru. Coinbase kọwara ihe mere na ọ họọrọ ka malite ngwaahịa na nke ugbu a na gburugburu ebe obibi, si:
“N'oge gara aga ọnwa ole na ole n'elu 100 oke ego e kere na nanị itinye ego na na ahia cryptocurrency.”
Coinbase Kpọchiri na-partnering na a US Securities & Exchange Commission usoro ore-dealer, otú na ijikọta na-atọ ndị ọzọ auditing na ego akuko nkwado, na-ezukọ na chọrọ nke “Sec usoro ore-dealer.”
Kraken enyele $ 1M ka blockchain onwe otu Mkpụrụ ego Center
Jesse Powell, CEO nke cryptocurrency mgbanwe Kraken, nyere $1 nde ndị nonprofit Mkpụrụ ego Center on Monday n'abalị na onwe nzukọ kwa afọ gala na New York City. Kraken nwekwara ekwele nkwa ka dakọtara ọ bụla onyinye ka Mkpụrụ ego Center ruo mgbe ọgwụgwụ nke ọnwa, ruo $1 nde.
Ọ bụ nnukwu otu onyinye mere ka Mkpụrụ ego Center, kwuru Neeraj Agrawal, a ọnụ na-ekwuru maka Washington, DC dabeere Chee echiche tank.
Bank of Zimbabwe bans ego oru iji Bitcoin
The Reserve Bank of Zimbabwe ka iwu niile ego oru na mba ozugbo kwụsị trading ma ọ bụ transacting na cryptocurrencies.
The akụ etiti kwuru ego oru ga wepuÚ ọ bụla ẹdude mmekọrịta virtual ego mgbanwe n'ime 60 ụbọchị na-gaba liquidate na restitute ẹdude akaụntụ ọtùtù.
RBZ edeba aha ichekwa ego na bank oru, Norman Mataruka, kwuru na "Dị ka ego ọchịchị, na Reserve Bank of Zimbabwe bụ mụta iwu ọha na eze ntụkwasị obi na nwere ibu ọrụ na-echebe ike n'ezi ihe nke na ugwo usoro… na Reserve Bank ga-anọgide na-anya nyochaa mpaghara na zuru ụwa ọnụ cryptocurrency nmepe iji agwa iwu direction. "
Korea kasị ukwuu cryptocurrency mgbanwe Upbit-egosi ya nile ego bụ ezigbo
UPbit ka nkwenye ya nile ego na cryptocurrency bụ ezigbo, dị ka mbụ kọrọ site @CryptoOfKorea.
South Korea nnukwu cryptocurrency mgbanwe ka a mara ọkwa na ọ bụghị ịgbanwe ọrụ ego na-eduhie investors.
Thailand waives 7% VAT na kaadị trades na-egosi 15% okpu uru tax
Thailand si Revenue Department ga-waive uru-kwukwara tax (VAT) n'ihi na ndị mmadụ erekwa na cryptocurrencies na mgbanwe ahịa mma site Securities na Exchange Commission (sec).
A ọhụrụ iwu na-achị cryptocurrency azụmahịa batara ike na May 14. Saroch Thongpracum, ngalaba Director nke iwu omume, kwuru na Tuesday ọ ga-N'ỤLỌ NCHE a ụkpụrụ waiving na 7-pasent VAT maka onye investors iji belata ha tax ibu arọ.
Ndị mmadụ n'otu n'otu ka ga-akwụ ụgwọ a 15-kwa-amụma isi obodo uru tax, makwaara dị ka a ikayakke tax, na ego akwụ na a azụmahịa.
Cryptocurrency mgbanwe BitOasis suspends fiat withdrawals
Dubai dabeere mgbanwe BitOasis ka kwụsịtụrụ UAE Dirham / BTC trading, ehota mbipụta na akụ arụ ọrụ mgbanwe onwe ya.
A nkwurịta okwu e zigara BitOasis ọrụ ụnyaahụ na-amalite Tuesday, ọzọ dirham nwere ike napụrụ mgbanwe, ahapụ ọrụ taa na-akpali ha itule n'ebe ọzọ ma ọ bụ elu ya elu na ihe dirham ma ọ bụrụ na chọrọ.
Ugbu, ọ dịghị ụbọchị set maka reactivation nke dirham withdrawals na ego site nnyefe.
LedgerX upgrades ọrụ interface maka Bitcoin nhọrọ trading
Bitcoin nkwekọrịta ikpo okwu LedgerX launching ọhụrụ, mfe interface na-ahapụ Bitcoin investors irite mmasị na ha ojiji.
The ọhụrụ ọrụ, mara ọkwa Tuesday, na-arụ ọrụ yiri nke ahụ, ka ya ẹdude Bitcoin nhọrọ oku na a streamlined ọrụ ihu maka investors, dị ka LedgerX president na ndị isi n'ihe ize ndụ ojii Juthica Chou.
“Anyị na-ịhụ ndị ọzọ ihe ina ndị chọrọ irite ụfọdụ ụdị mmasị apụ ha Bitcoin na agbazinye bụ kpọmkwem eke ndị mmadụ – karịsịa agbazinye ebe ha irite ha mmasị azụ na Bitcoin. Ya mere, anyị na-ịhụ sonyere abịa azụ trading.”
Mgbe nile Financial Ex ...
Court anakwere Mt. G...
Ka 25, 2018 na 12:50 AM
Ka 29, 2018 na 1:30 AM
June 11, 2018 na 12:24 AM
June 22, 2018 na 6:17 AM
You are really a good webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Ọzọkwa, The contents are masterwork. You have performed a magnificent job in this topic!